Lammiin Itoophiyaa xayyaara kutaa meeshaaa keessatti dhokatee Finfinnee Siwiidin seene - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Lammiin Itoophiyaa xayyaara kutaa meeshaaa keessatti dhokatee Finfinnee Siwiidin seene
Lammiin Itoophiyaa xayyaara kutaa meeshaaa keessatti dhokatee Finfinnee Siwiidin seene
Lammiin Itoophiyaa xayyaara bakka meeshaan itti fe’amu keessatti ufdhoksuudhaan Finfinnee irraa Stookoolm (Siwiidiin) seenuun isaa gabaafame. Hojjattoonni dirree xayyaara Stookoolm xayyaara Finfinnee Stookoolm quphate keessaa meshaa buusuuf kutaa meeshaa yoo seenan kan argan meeshaa qofaa hinturee- dargaggessa umrii 24 meeshaa woliin fe’ames.
Dargaggeessi kuni lammii Itoophiyaa ta’uu isaas poolisiin Siwiidin mirkaneeffateera. Akka odeeffannoon poolisii Siwiidin ifa godhetti namni kuni hojjataa dirree xayyaara Boolee ture. Egaa carraa hujii gara xayyaaraatti isa dhiheessetti fayyadameeti kan gara Awurooppaatti balali’uu danda’e.
Wonti tarii raajii ta’uu malu, dargaggeessi kuni, meeshaa woliin fe’amee qabbanaafi haphina qilleensaa xayyaara keessaa dandamatee sa’aa saddeet booda, fayyaa isaa irra osoo rakkoon kana jedhamu hingeenne, xayyaaricha woliin nagaan Stookoolm qubachuu isaati.
Yeroo too’annaa poolisii jala oolutti, namni kuni woraqaa eenyummaa isaa argisiisu kan harkaa qabu ta’uu poolisiin Siwiidin beeksiseera. Dargaggeessi kuni Siwiidinitti koolugaltummaa kan gafatuuf deemu ta’uunis hubatameera. Haaluma kanaan poolisiin yeroo muraasaf too’anna jala erga oolchee booda gara damee immigireeshinaatti dabarseera.
Oduudhuma baqaatiin wolqabatee, laakkofsi lammiiwwan Itoophiyaa koolugaltummaa Siwiidinitti gaafatanii bara kana %140 dabaluunis hubatameera.
Namni dirree xayyaara Boolee keessa hojjatu tokko bifa kanaan baqachuun isaa hangam biyya keessatti rakkoon heddummaachuufi jireenyi hammaachuu isaa agarsiisuun alatti wanti gochi kuni nutti mul’isu kan biraa jira hinfakkaatu.
Previous articleHaalli qilleensa El Nino cimaan uumamuuf deema; Gaafa Afrikaas hubuun nimala
Next articleDaa’imti umrii 11 gudeeddiin ulfoofte ilmoo dhalte
gobe Aug 16, 2015 At 4:18 am
Comment:very very good